ညီလင်းသစ်: တွယ်ငင်တိုးရစ် သုံးဆယ့်ရှစ်...
Posted by ညီလင်းသစ် au 17.2.13
HAPPY BIRTHDAY.... KO NYI!
Happy Birthday Brother! တိမ်ပြာ(မနောမြေ)
အပြုံးဆက်သစ်ဝေ ... ပါစေသတည်း ... ။
Happy Birthday ကိုညီလင်း...
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အသက်တွေ ကြီးလာကြဘီနော်... ဟီးဟီး...
May all happy returns!!
happy birthday ပါ ကိုညီလင်းသစ်...။
အရင်တစ်နှစ်က Modern Cake နဲ့ သူ့ meaning တွေက လေးနက်တယ်.. :) ဒီတစ်နှစ် ကိတ် မလုပ်ဖြစ်ဖူးလား...
Happy Birthday Ko Nyi Linn Thit !!!
Wishing you all the best today and throughout the coming many years !
ခေါင်းစဉ်လေးက လှလိုက်တာ ။
ပျော်ရွှင်ဖွယ် မွေးနေ့မင်္ဂလာရက်မြတ်ပါ မောင်ညီလင်း။
လူသားတိုင်းမှာ အမှတ်တရ ဖြစ်ရပ်လေးတွေ ကိုယ်စီရှိကြသလို အဲ့ဒီအမှတ်တရလေးတွေဟာ တစ်ဘ၀စာအတွက် မမေ့မပျောက်ခိုင်မာတတ်ကြတယ်။
Ko Nyi Linn
-Nyi Ma War So
ပျော်ရွှင်စရာ မွေးနေ့မင်္ဂလာပါ ကိုညီ…
ပျော်ရွှင်မင်္ဂလာရှိသော မွေးနေ့ဖြစ်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ် အစ်ကို။း)
Happy Birthday Ko Nyi!
၃၈ နှစ်လား ?
ယခု ၃၈နှစ်မြောက်မွေးနေ့မှသည် နောင်လာမဲ့
မယုယမွန်၊ မဘေဘီ၊ ညီမလပြည့်၊ မနောမြေကတိမ်ပြာ၊ မအိုင်အိုရာ၊ ညီ၊ မမေ၊ အစ်မသက်ဝေ၊ -m, johnmoeeain, ညီမလရိပ်၊ ကိုလွင်ပြင်၊ ကိုညိမ်း၊ တီတင့်၊ ညီမဝါဆို၊ ဆု၊ ညီမလေးဇွန်၊ nyi ma lay, ညီမမိုးနတ်....
ကျနော့်ရဲ့ မွေးနေ့အမှတ်တရ ထားခဲ့တဲ့ နှုတ်ဆက်စကားတွေ၊ ခြွေခဲ့တဲ့ ဆုမွန်တွေ၊ စပ်ခဲ့တဲ့ ကဗျာလေးတွေ.. အားလုံး၊ အားလုံးအတွက် တကယ့်ကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ..၊ အဲဒီ ချစ်ခြင်း မေတ္တာတွေ၊ အသိအမှတ်ပြုမှုတွေသာ မပါခဲ့ဘူးဆိုရင် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇ ဟာ ကျနော့်အတွက် ဘယ်လိုမှ အရောင်တောက်နိုင်ခဲ့မှာ မဟုတ်ပါဘူး၊ အခုတော့ ပျော်ရွှင်ခြင်း ကောင်းကင်ထက်မှာ အဆုပ်လိုက် ပွင့်သွားခဲ့တဲ့ မေတ္တာပန်းတွေကို ကြည့်ရင်း ချမ်းမြေ့ ရပါတယ်၊ ကျေးဇူးပါလို့ ထပ်ပြောပါရစေ...။
ပျော်ရွှင်သောမွေးနေ့ ကို ကျန်းမာစွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါ အကိုရေ
မနေ့ကတည်းက သတိရနေတယ် အစ်ကို့မွေးနေ့ကညီမနဲ့တစ်လတိတိပဲခြားတာကိုးး..။ အွန်လိုင်းဒီနေ့မှတက်ဖြစ်လို့ wish လုပ်ဖို့နောက်ကျသွားတာ...။ ကိုညိမ်းပြောသလိုပဲ ဘ၀စဖို့နှစ်နှစ်တောင်လိုပါသေးတယ်လေ...း)
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ၃၈ ဆိုတာ တကယ့်အရွယ်ကောင်း နုပျိုခြင်းနဲ့ရင့်ကျက်ခြင်း အလည်ဗဟိုတည့်တည့်နေရာ...။ မိသားစုနဲ့အတူ ဘ၀ခရီးရှည်ကို အေးချမ်းစွာ ဆက်လက်လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေလို့...။
အစ်ကို့ကြည့်၇တာ ကျွန်းခရီးစဉ်လေးနဲ့ ပက်သက်ပြီး တော်တော်စိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ပုံပဲး) ဟွန်း မနာလိုလိုက်တာ
ပဲများသော အထာကိုင်သော ဆရာကြီးဆန်သော လှုပ်လိလှုပ်လဲ့ နဲ့ စကားတတ်သော သူများနှင့် ဝေးကွာပါစေး)
ကိုယ်တွေ့တာကို အစ်ကို့ကိုမတွေ့စေချင်လို့ပါ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စလုံးမှာ သိပ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့သူတွေ အချို့ရှိတယ် ။
မွေးနေ့မှာရော အမြဲတမ်းရော ချစ်သောမိသားစုတဲ့အတူ ပျော်ရွှင်ပါစေ..။ ကိတ်မုန့်က ၂၀၁၁ ကနော်.... စိတ်ထဲမှာ မနှစ်ကလို့ဘဲထင်နေတာ... အချိန်ကုန်မြန်လိုက်တာ...။
Happy Birthday Ko Nyi Linn..
May your wish come true!!!
ဒုတိယအကြိမ်မြောက် Happy Birthday ပါအကို...:)
ဘဝနဲ့ ဆန္ဒ တစ်ထပ်တည်းကျပါစေလို့... ဆန္ဒပြုရင်း ..
ကောင်းသောနေ့ရက်လေးတွေ ပိုင်ဆိုင်ပါစေအကို ...
ထပ်မံ၍ Happy Belated Birthday လုပ်သွားပါတယ် ကိုညီရေ..
မင်္ဂလာမွေးနေ့ပါ ကိုညီလင်းသစ် .....
ကျွန်တော်နဲ့ တစ်နှစ်လောက် ကွာတာပေါ့။
ဟတ်ပီးဘတ်ဒေး ကိုညီ..ကျန်းမားပျော်ရွှင်ပြီး စာတွေ အများကြီး ရေးနိုင်ပါစေ..